Nhau - Musangano wepfupi-wepfupi musangano weShandong Zhihua Pipe Indasitiri / Huabao Machinery Lean Promotion Project yakabatwa zvakanaka
Musi waChikunguru 28, 2020, musangano wepakati-wepfupi wedanho rekutanga reLean Promotion Project yeZhihua Pipe Indasitiri / Huabao Machinery yakabudirira kuitwa. Zhang Wei, maneja mukuru weZhihua Pipe Viwanda / Huabao Machinery, uye manejimendi wekambani pamatanho ese, Shandong Huazhi Project Consultant Chikwata chakapinda mumusangano uyu.
Musangano uyu wakapfupikisa zvakawanikwa, zvikanganiso uye nhanho dzinotevera dzekusimudzira kwe2020, uye yakaratidza mafambiro ekufambisa zvakanaka kwekusimudzira kwechipiri muhafu yepiri yegore. Vashandi pamatanho ese vakaratidzawo kutsunga kwavo kudzidzira kuonda uye kushandira kugona.
Kuburikidza nehafu yegore yekusimudzira, mamwe manejimendi zvemukati zvakashandurwa kubva pachinhu kuenda pane chimwe chinhu. Kuziva uye maitiro evashandi zviri kuchinja zvishoma nezvishoma, uye manejimendi zviitiko zvinowanzo kuve zvakaenzana.
Zvichienderana nemamiriro ekunze uye nhanho chaiyo yekusimudzira yebhizimusi, chirongwa chepakati neshure-refu chesangano rakagadziriswa, ichiisa hwaro hwakanaka hweinotevera-nhanho systemic basa.
Gadzira kambani musangano musangano manejimendi, kumisikidza mamisangano manejimendi mwero pamatanho ese, uye simbisa kushanda kwegadziriro yemusangano wekambani.
Maitiro ekuongorora mashandiro uye zvirongwa zvekutarisa zvakamisikidzwa uye zvishoma nezvishoma zvinoshandiswa kuongororo yemhedzisiro. Iyo yekukurudzira kutungamira yakasimbiswa uye mhedzisiro iri kutanga kuoneka.
Kuburikidza nemaitiro ekudzora uye mhedzisiro yekukwevera, kuongororwa kweakaunzi kwemaakaunzi kwakabatanidzwa mune zvakajairika manejimendi, uye chimiro cheyekuwedzera chiri kuwedzera kuverengerwa uye zvishoma nezvishoma kushandira iyo yekugadzira sangano uye kurongeka kuendesa.
Iyo inokwidziridzwa kusimudzira yemhando tambo inopa yakajeka uye inogoneka nzira yekuvandudzwa kweyekugadzira saiti manejimendi.
Iyo yepakati-kurongeka kuronga manejimendi maitiro anga atovhurwa ekutanga, ayo anogona kupa sainzi uye inoshanda kutungamira uye vimbiso kune iyo yese yekugadzira maitiro, uye yakagadzira yakamisikidzwa mashandiro ekuronga kuburikidza nekushandisa kweiyo system.